Love – Page 20 – Gentleman Magazine
ယောက်ျားတွေဘာကြောင့် ဖောက်ပြန်တာလဲ ? အဖြေက အံ့အားသင့်စေမှာပါ။
တစ်လင် တစ်မယား စနစ် စတင် ကထဲက ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာ လဲ အပြိုင် ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာ ခုိုးတာ၊ ညာတာ ၊ လိမ်တာ စတဲ့ လူတွေ ရဲ့ပင်ကိုယ် စိတ်ရင်းထဲက မကောင်းတဲ့စိတ်ရိုင်းတွေပါ။ လူဆိုတာ ရှိနေသ၍တော့ ဖောက်ပြန်တာတွေ လဲရှိနေမှာပါ။ ဖောက်ပြန်တာ ကို
ကိုယ့်ရည်းစား ထားသွားအောင် လုပ်နည်း
လမ်းခွဲတာ ကအရမ်းခက်ခဲ နက်နဲတဲ့ အလုပ်တော့မဟုတ်ပါဘူး. တခါတလေ မှာ အရမ်းနဲ့ လွယ်လွန်းပါသည်. ဥပမာ ကိုယ်တခြားဆော်သွားဖွန်နေတာ ကိုယ့်ဆော်မိသွားတာတို့ လိုမျိုး.. တခါတလေ မှာကိုက ဘာအမှားတစ်ခုမှ မရှိပဲ ဘလိုင်းကြီး အဖြတ်ခံရတာမျိူးလည်းရှိပါသည်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဘက်က အမှားကိုယ် လွယ်လွယ်နဲ့သိရန်၊ ဒါမှမဟုတ် သူ့ဘက်က စဖြတ်စေရန်
ကောင်မလေး ချောချောလေး ရထားသူတွေရဲ့ အခက်အခဲ ၁၀ မျိုး
ယောက်ျားတွေဟာ ရုပ်ရည်အလှကို ကြိုက်တတ်ပါတယ် တဲ့။ အဲဒါက ကျွန်တော်တို့ ဦးနှောက်ထဲမှာ မွေးရာပါမို့ ပြင်လို့ မရပါဘူး။ ရုပ်ရည် လှပတဲ့ မိန်းမတွေနဲ့ တွေ့တိုင်း ယောက်ျားတွေ ကျရှူံးသွားတတ်ပါတယ်။ အရမ်းကံကောင်းတဲ့ သူတွေကတော့ အဲဒိလို မိန်းကလေးက ပြန်ကြိုက်တာကို ခံစားရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အဲ့လို မိန်းကလေးရဲ့
အတွဲတော်တော်များများဟာ ကိစ္စပြီးတာနဲ့ ဟိုဘက်လှည့် အိပ်ကြတာ များမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့မပါပါဘူး။ လိင်ဆက်ဆံ ပြီးပြီးချင်း အချိန်လေးဟာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် သံယောဇဉ်ရစ်နှောင်ဖို့ အကောင်းဆုံး အချိန်ပါပဲ။ သင်က သူမကို ထွေးပွေ့ပြီး အိပ်ဖို့ကလွဲလို့ ဘာမှ မလုပ်တတ်ရင် လိင်ဆက်ဆံပြီး လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ ရိုမန်တစ်ဆန်တဲ့ ကိစ္စ
ကျွန်တော်တို့ဟာ အချစ်စစ်အကြောင်းစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ တွေဝေနေတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒါဟာ တကယ်ရှိနိုင်ပါသလား။ ပြသနာအားလုံးကို ကျော်လွှားသွားနိုင်တဲ့ အချစ်စစ်လေ။ တကယ်တော့ ချစ်ဇာတ်လမ်းဆိုတာ ချစ်နေရုံနဲ့ မပြီးသေးပါဘူး။ သင်ဟာ အားလုံးကို ကြောင်နေမယ့်အစား အောက်ပါအချက်မျိုးတွေ ပြည့်စုံတဲ့ မိန်းကလေးကို ရှာလိုက်ရင် သင့်ရဲ့ ချစ်ဇာတ်လမ်းဟာ အရမ်းပျော်စရာကောင်းနေမှာပါ။ ချစ်ဇာတ်လမ်းအောင်မြင်ဖို့ အဓိကအချက် ၁၀
ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲ ဆက်ဆံပါ (18+)
သင်က သန်မာတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ပါ။ သင့်ကောင်မလေးနဲ့ အိပ်ရာကိစ္စမှာလဲ သူမကြိုက်လောက်မယ် ထင်တဲ့ ပုံစံအတိုင်း မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဆက်ဆံပါတယ်။ ပြသနာကတော့ သူမက မြန်တာကို မကြိုက်ပါဘူး။ အနှေးပြကွက်လေးတွေအကြောင်း လေ့လာရင်း နှေးကွေးတဲ့ ဆက်ဆံမှုပုံစံက ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာ လက်ခံလိုက်ပါ။ ဘာကြောင့် မိန်းမတွေ နှေးနှေးဆက်ဆံရတာ ပိုကြိုက်တာလဲ?? မိန်းမတစ်ယောက်
လက်တွဲဖော်အမျိုးသမီးကို လေးစားသမှုနဲ့ ဆက်ဆံတတ်ဖို့
ချစ်သူရည်းစားဆက်ဆံရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လင်မယားချင်း ဆက်ဆံရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အပြန်အလှန် ချစ်ခင်ရုံ သာမက လေးစားတတ်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်အမျိုးသမီးကို ချစ်နေရုံနဲ့ မလုံလောက် ပါဘူး။ သူမကို လေးစားသမှုမရှိဘူးဆိုရင် ရေရှည်ဆက်ဆံရေးမှာ ထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အမျိုးသား တွေအတွက် ဘ၀လက်တွဲဖော်အမျိုးသမီးကို ဘယ်လို လေးစားသမှုရှိသင့်လဲဆိုတာကို စုစည်း ဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်။
ချစ်သူနှစ်ဦးကြားဆက်ဆံရေးဟာ ငွေရောင်ပိတ်ကားထက်က အချစ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလို အမြဲတမ်း စိတ်ကူးယဉ်ဆန်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ့်လက်တွေ့ဘ၀မှာတော့ တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက်၊ တစ်လပြီး တစ်လ၊ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် ချစ်ခင်ပျော်ရွှင်နေနိုင်ဖို့အတွက် ကြိုးစားကြရမှာပါ။ ဒ့ါကြောင့် သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ကို အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ပြီး ချင်ခင်ကြင်နာနေနိုင်ဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်သင့်တာလေးတွေကို ပြန်လည်ဝေမျှ ပေးလိုက်ပါတယ်။ နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ရန် နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေပြီး သင့်ကြင်သူရဲ့စိတ်ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်တွေကို
ချစ်သူ စိတ်ပျက်မသွားစေဖို့ သိထားသင့်တဲ့ အချက်များ
ချစ်သူ စိတ်ပျက်မသွားစေဖို့ သိထားသင့်တဲ့ အချက်များ ချစ်သူစုံတွဲတွေအကြားမှာ ပြဿနာဖြစ်နိုင်စရာတွေကို ချရေးမယ်ဆိုရင် အဆုံးမရှိစာရင်းတစ်ခု ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့ ပြဿနာကြီးကြီးမားမားမဖြစ်အောင် ရှောင်လွှဲနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ သူမရဲ့ အရင်ရည်းစားဆီကနေ ပညာယူဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင်လုပ်ရမှာက သေချာနားထောင်မှတ်သားထားဖို့ပါပဲ။ သင့်ချစ်သူက သူမရဲ့အရင်ရည်းစားနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ စိတ်ပျက်စရာ အကြောင်းအရာတွေပြောလာပြီဆိုရင် နားတွေစွင့်ထားသင့်ပါတယ်။
သင့်ဇနီးမယားက သင့်ကို သိစေချင်တဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှု အကြံဉာဏ် ၁၅ ခု
မိန်းမတွေ သင့်ကို သိစေချင်တဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှု အကြံဉာဏ် ၁၅ ခု အပြင်မှာ ရာသီဥတု အေးနေရုံနဲ့ သင့် လိင်မှုဘဝပါလိုက်အေးသွားမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဆောင်းတွင်းဆိုတာ သင့်ပါတနာနဲ့ နှစ်ယောက်ထံ အချိန်ဖြုန်းဖို့ အကောင်းဆုံး ရာသီပါ။ အဲဒါကြောင့် မိန်းကလေးတွေ ဘာကြိုက်တတ်လဲဆိုတာကို အရမ်းလန်းတဲ့ နှိုးဆွမှု အိုင်ဒီယာတွေကနေ